नाबालक श्रीमतीसँग यौन सम्बन्ध राखे बलात्कारको सजाय हुने ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
नाबालक श्रीमतीसँग यौन सम्बन्ध राखे बलात्कारको सजाय हुने !
एजेन्सी : भारतको एक अदालतले नाबालक श्रीमतीसँगको यौन सम्बन्ध राख्न अनुमति दिने एक कानुनी प्रवधानलाई बदर गरेको छ । यो कानुन बदर भएसँगै भारतमा श्रीमानले आफ्नी नाबालक श्रीमतीसंग यौनसम्बन्ध राखेमा बलात्कारको सजाय हुने छ ।
बलात्कार सम्बन्धी कानुनको एक भागका रुपमा रहेको उक्त बुंदामा विवाहीत दम्पत्तीबीच वैध यौन सम्बन्धका लागि श्रीमतीको उमेर १५ वर्ष भन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख थियो। अब नयां कानुनी प्रावधान अनुसार नाबालक श्रीमतीसंगको यौन सम्बन्ध बलात्कार भएको खबर बिबिसीले छापेको छ ।
भारतमा विवाह र यौन सम्बन्धका लागि महिलाको न्यूनतम कानुनी उमेर १८ रहेको छ तर वैवाहीक बलात्कारलाई अपराध मानिंदैन।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई महिला अधिकारवादी अभियानकर्ताहरुले प्रसंशापूर्वक स्वागत गरेका छन् । यता केही व्यक्तिले भने नयां कानुनी प्रावधान लागु हुन निकै गाह्रो पर्ने बताएका छन्।
फैसला अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका विवाहीत नाबालकहरुले सहमति विना यौन सम्बन्ध राख्‍ने आफ्ना श्रीमानका विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा चलाउन पाउने छन्।
आफ्ना श्रीमानले जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखेको एक वर्षभित्रै उजुरी गर्नु पर्ने प्रावधानमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतमा आवेदन दिएका एकजना प्रमुख अभियानकर्ता विक्रम श्रीवास्तव भन्छन् सर्वोच्च अदालतको फैसलाले किशोरीहरु विरुद्धको ऐतिहासिक भूल सच्चाएको छ।
कानुनले बालिकालाई शक्तिशाली बनाए पनि अभिभावकको स्वीकृतिमा विवाह बन्धनमा बांधिकाएका नाबालक दुलहीहरुले आफ्नो श्रीमानका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न प्रहरी वा अदालतसम्म जाने साहस सामान्यतया जुटाउन नसक्ने देखिएको छ ।